Iyo Chinese Apple Watch iri kutengeswa ikozvino | Ndinobva mac
Chinese Chinese Watch ikozvino yave kutengeswa
MaChinese haamire mukuyedza kwavo uye vatotanga kuoneka paYouTube unboxings yemakopi akadzivirirwa ezvechave, kutanga kwaApril, iyo itsva Apple Watch. Sezvatinogona kuona mumavhidhiyo akasiyana, maviri maApple Watch mhando dzakagadzirwa, imwe iri yegoridhe ine tambo tsvuku, imwe iri chrome ine tambo nhema, uye pakupedzisira, mhando dzeakakurumbira Apple Watch kusvika zvino.
Nekudaro, isu hatisi kuzotarisira kuti aya mapirate mamodheru eApple Watch ndiwo mushonga uye kuti, mukuwedzera kumhedzisiro yakaipa kwazvo, mukati mayo inomhanya Android system zvakanyanya, zvakashata.
Kune vese avo vasingakwanise kumirira kuti vaone zvavari chaizvo iyo Apple Watch kupfuura yea Cupertino Vachaenda kunotengesa kutanga kwaApril, unogona kutowana pirated kopi yakagadzirwa, zveshuwa, kuChina. Asians vakatora nguva shoma yekuenda kumberi kweApple zvakare uye kutora, pachena, dombo izvo chaizvo, pakutanga kuona, zvinotaridzika zvakanyanya sechinhu chaicho. Kana zviri zvekupedzisa, hazvidi kuti utarise zvakanyanya kuti zvakashata zvipedze kusvetuka kumeso edu.
Vhidhiyo yatinokuperekedza inobva ku Unbox Therapy, iyo anga ari mumwe wekutanga YouTubers ku unbox. Muvhidhiyo, iyo Apple Watch dombo inofananidzwa nevamwe vakaita seLG's. Imwe yemabhenefiti ekuburitswa kweaya maonesheni ndeyekuti mavhidhiyo mazhinji anoonekwa maunogona kuona zvakajeka kuti wachi inotarisisa chaizvo pachiuno.
Zvino, avo vedu vanoda chaiyo Apple Watch havana imwe sarudzo kunze kwekumirira kutanga kwaApril uye kugadzirira kadhi rechikwereti, nekuti zvirokwazvo mutengo hausi kuzove wakaderera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chinese Chinese Watch ikozvino yave kutengeswa
Pamplona Smash, yemahara kwenguva shoma
Mutambo Space Age: Iyo Cosmic Adventure, inogara paMac App Store